देउवालाई पौडेलको प्रश्न : बहुमत छ भन्दैमा एकलौटी निर्णय गर्न मिल्छ ? – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
देउवालाई पौडेलको प्रश्न : बहुमत छ भन्दैमा एकलौटी निर्णय गर्न मिल्छ ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका र विभाग गठनको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । शनिवार महाराजगञ्जमा पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई धरापमा पार्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णयले अत्यन्त गम्भीर बनाएको जनाए ।